ကွမ်းစာတဲ့လူတွေ မကြောက်တတ်ရင်တော့ ဝင်ဖတ်ကြည့်သွားလိုက်အုံးနော်… – အနုပညာရပ်ဝန်း
“ကွမ်းစားသူများ” ကို တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း… ခံတွင်းစစ်ဆေးပေးခွင့်ရယူ..
တွေ့ရှိချက်.. စစ်ဆေးမှုခံယူသူ (၈၆)ဦးအနက်… ကင်ဆာအဆင့်(၃ဦး)၊ ကင်ဆာအကြိုအဆင့် (၁၆)ဦးကို ကင်ဆာအဆင့် မရောက်မှီတွေ့ရှိသဖြင့်… အသိပညာပေးလိုအပ်သည်များဖြည့်ဆည်း… Oral screening for 86 Betel chewers. Malignant growth in 3, Pre-cancerous lesions in 16. Counseling and referral carried out.
22-7-2018 Thanks Oral Team. Early detection saves lives! ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းရဲ့ ၉၀% က ဆေးရွက်ကြီးငုံခြင်း၊ ကွမ်းယာစားလို့ပါ။ သွားအချွန်အတက်တွေနဲ့လျာ နဲ့ ပါးစောင်မှာ ပွတ်တိုက်မှုတွေများရာကနေ အနာဖြစ်။ အနာ မကျက်ရာကလည်း ကင်ဆာ အဖြစ်ကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ HPV ကြွက်နို့ပိုး ကြောင့်လဲ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိမိခံတွင်းမှာ သံသယဖြစ်စရာ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုခုတွေ့ရင်၊ ခံစားရရင် နီးစပ်ရာ သွားနှင့်ခံတွင်း ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစေလိုပါတယ်။ ပုံမှန်တစ်နှစ် ၂ ခါ ခံတွင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းယာစားခြင်း တို့ကိုရှောင်ကြဉ်မယ်ဆို ခံတွင်းကင်ဆာကို ကာကွယ် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။